ကလိုစေးထူး: တရားခံ ဘယ်သူလဲဟေ့...
ဒေါ်ငွေကြည် လက်ဖက်လေးကတော့ သန့်ရှင်းမူ ရှိနေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဆိုးဆေးတွေ ထဲ့ဆိုးနေတာကတော့ အဟဲ မသမာသူ စီးပွါးရေး သမားတွေပေါ့.. ကိုယ့်ဘက်ကို ယှက်တဲ့လိပ်များပေါ့ အကိုရေ..
အနည်းအကျဉ်းလုပ်လို့မရတဲ့ အလုပ်ပါ၊ အရောင်အရင့်အဖျော့ညီအောင် (batch တခုနဲ့တခု)ခန့်မှန်းရအလွန်ခက်တဲ့အလုပ်ပါ၊ ဒီတော့ လက်လီရောင်းတဲ့သူတွေ လုပ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကို စံချိန်စံနှုန်းနဲ့ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအရေးယူတဲ့ စနစ်ကင်းမဲ့နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားရဲ့ လိုအပ်ချက်ပါ။ ဗမာငရုပ်ဆီဆို အဆိပ်ပြင်းတဲ့ခဲသတ္တုဆိုးဆေးတွေ၊ ရှလကာရည်ဆို စားသုံးရန်မဟုတ်တဲ့ ဓာတုအခြေခံ အက်ဆစ်တွေ၊ တခြားမရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ စားသုံးကုန်တွေအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက် စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာ စာရင်းတောင်ရှိဟန်မတူပါဘူး။
Apr 6, 2009, 11:20:00 PM
ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှေ့ ရောင်းလေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရှာလပတ်ရည်အေးအေး ဆိုတာ၊ ခွဲစိပ်ပြီးသား မချစ်စုသရက်သီးတုတ်ထိုး အရောင်ဝါဝင်းနေတာတွေ ဒီဆိုးဆေးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာ၊ စားဝတ်နေမှု အရာရာချွတ်ခြုံကျနေလို့ အမြတ်စွန်းတပြားတချပ်အတွက် ဈေးကြီးတဲ့တကယ့် စားကုန်ဆိုးဆေးဘယ်ဝယ်နိုင်မလဲ။ အန္ထရာယ်ရှိမှန်းလည်း ပညာပေးအသိပေးတဲ့ စနစ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ အခုအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ထိန်းကွပ်မှုကလည်း တခြားနေရာတွေမှာအားသန်တာ မယောင်ရာဆီလူးနေတာ။
Apr 6, 2009, 11:44:00 PM
အော် လ္ဘက်.. လဖက်.. သူလည်း မနေရပါလားနော်..း)
Apr 6, 2009, 11:59:00 PM
ဗမာဒန်ပေါက်ထ္မင်းဝါထိန်နေတာ အလွန်ဈေးကြီးတဲ့(တပေါင်ကို US ဒေါ်လာ ၅ဝဝ မှ ၅ဝဝဝ ထိ) saffron ခေါ် ပန်းဝတ်ဆံကိုအခြောက်ခံထားတဲ့ ဆိုးဆေးကို ရာနှုန်းပြည့် ဘယ်သူသုံးပြီးရောင်းနိုင်ပါ့မလဲ။ (sorry for too many comments)
Apr 7, 2009, 12:12:00 AM
ကျနော် ကတော့အုန်းကြော် ပါတဲ့ လူကြီးသုပ်ကိုကြိုက်တယ်..
အထူးသဖြင့် အသုပ်ဆိုင်တွေမှာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်စားရတဲ့လက်ဖက်ကိုကြိုက်တယ်..
Apr 7, 2009, 7:07:00 AM
မြန်မာပြည်က ၀ယ်လာတဲ့ လက်ဘက်တွေ ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေတယ်။ မနွှင့်ပစ်ရက်လို့..
Apr 7, 2009, 10:04:00 AM
အဲဒီသတင်းကတော့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ တော်တော်ရိုက်ခတ်သွားတာ အမှန်ပဲနော်။ မြန်မာဆို လက်ဖက်ကြိုက်တဲ့ အမျိုးမို့ တော်တော်ခက်တယ်။ သူ့လက်ဖက်သားချည်း ကောင်းနေတဲ့ဟာ ဘာလို့ ဆိုးဆေးတွေနဲ့ ကူစရာ လိုမလဲ။ အရောင်လှချင်လို့များလား။ လောဘများ အတောမသတ်ဘဲနော်။
Apr 7, 2009, 1:02:00 PM
လက်ဖက်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှ အဲ့ဒီသတင်းကြားတော့ goat wind ဖြစ်သွားတယ်...
Apr 7, 2009, 2:43:00 PM
ပြောကြတာတော့ ဆိုးဆေးက ကုန်ကြမ်းကတည်းက ပါတာ ဆိုပဲ။ အဲဒါကြောင့် အားလုံး ထိကုန်တာပေါ့။ အချိုမှုန့်တုန်းကလည်း အချိုမှုန့်။ တသက်လုံး စားလာပြီး နောက်မှ မစားရဲကြဘူး။ အခုလည်း ဗိုက်ထဲဝင်နေတာ အတော်များပြီ တွေးပြီး ထပ်စားတာပဲ။ :D
Apr 7, 2009, 8:53:00 PM
ကျွန်မ အမျိုးသားကပြောတယ်… သူတို့ ရွာက လဘက်တွေမှာ ဆိုးဆေးပါမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်တဲ့… သဘာဝအတိုင်းမိုလို့ တဲ့… ဒေါ်ငွေကြည်လို လဘက်မျိုးထင်တယ်… စကားမစပ်… ဒေါ်ငွေကြည်ဆိုင်မှာ လဘက်တပွဲကို ဇိမ်ခံစားတဲ့ ကောင်လေးတွေထဲ နဂျယ်ကောင်လေးရောပါသေးလား… သမီး၎ယောက်နာမည် ခုထိကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးတယ်ဆိုတော့… အဟမ်း… အဟမ်း… (နောက်တာနော်)…
ကိုစေးထူးရေ… မြန်မာတွေ လဘက်ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို ခုထိစားနေကြတုန်းပဲ… တကယ်တော့ အဲဒီဆိုးဆေးတွေက လဘက်တခုထဲ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်….
Apr 8, 2009, 12:28:00 AM
Apr 8, 2009, 8:05:00 AM
Apr 8, 2009, 11:11:00 AM
UPG အိမ်သုတ်ဆေး ကုမ္ပဏီကဖြစ်နိုင်တယ်..။ အဲ့ဒီ့ကြော်ငြာကို ရိုက်ပေးတဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းကြီးလဲ ဒီအတိုင်းဆို တရားခံ စာရင်းထဲပါနိုင်တယ်..။ နောက် ဒါရိုက်တာ..။ နောက် မီးထိုးမှန်ထိုး..။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ မာမီ...။ ရှူတင်မန်နေညာ..။ ကားဒရိုင်ဘာ...။ နောက်ဆုံး..။ အဲ့ဒီ့ကြော်ငြာကို ပြတဲ့ .... ပြသတဲ့...။ အဲ ပြသတဲ့..။ ဘာပါလိ့မ်...။ :P
Apr 8, 2009, 4:35:00 PM
အစ်ကိုအကြီးဆုံးဆိုတာ ကိုစေးထူးများလားဗျို့ ။
Apr 9, 2009, 7:35:00 PM
Myanmay Ready-made popular brands of pickled tea in markets in Burma have been found to containadangerous chemical dye, the Ministry of Health announced on March 12.
The ministry said 43 brands were believed to be affected, including well-known names such as Ayee Taung, Shwe Tote, Pin Pyo Ywet Nu and Mya Thida which were found to containabanned chemical dye called Auramine O.
Auramine O is traditionally used to dye cotton, wool, silk, paper and leather. A government-backed newspaper reported that the chemical can cause diseases of the liver and kidneys, and possibly cancer.
That announcement is too late baby.Many peoples had been suffered from so many cases.
Most of Myanmar are poor knowledge in medical fields.
Thank you very much Mr. Klosayhtoo for your post "Who is criminal, who is responsible?". Your Lahpet story isabeautiful traditional Myanmar view. I worry about that little family.
Apr 10, 2009, 9:21:00 AM
ကိုကလိုစေးထူးရဲ့ blog ကို link ချင်လို့ ခွင့်တောင်းပါတယ် ...။
Apr 10, 2009, 10:54:00 AM
ကိုနဂျယ်ကောင်ရေ့ ညီ့ကိုလည်း ဒေါ်ငွေကြည်ဆိုင်က လက်ဖက်သုတ်လေးတစ်ပွဲလောက် ၀ယ်ကျွေး ဆီကရွှဲရွှဲ နှမ်းများများနဲ့ ပြီးတော့ မြေပဲနဲ့ ကြက်သွန်ကြော်လည်း မနည်းစေနဲ့လို့ :P
Apr 19, 2009, 9:12:00 AM
မအယ်ဆို တစ်ပိသာထုတ် ဇယန်းကို လွှင့်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ဆယ်ထုတ်မကက စားပြီးပြီ။
လက်ဘက်ပဲ လက်ဆောင်လိုချင်တာ။ အိမ်က လူကြုံရှိရင် လက်ဘက်လေးသာပေးလိုက်ပါလို့ တစ်ချိန်လုံးမှာရတာ။
ဆေးဆိုးဆိုးတဲ့ လူက ဆိုးအုန်း အစားအသောက် စီစစ်တဲ့သူတွေက ဘာလုပ်နေလဲ မသိပါဘူး။
တစ်ခြား မျှစ်တို့ ငရုတ်ဆီတို့ဇီးထုတ်တို့ ရေခဲချောင်းတို့ အရောင်တင်မှုန့် ရော လေ။
ဒါနဲ့ ကြို့ ပင်ကောက် ရောက်ဖူးတယ်။ ဗမာဆေးဆရာပဲ နာမည်မေ့နေပြီ။ သူတို့ အိမ်သွားလည်တာ။
သာကူ မုန့် ဖက်ထုတ်လေ။ ကြို့ ပင်ကောက်က မအယ်သိတ်ကြိုက်တယ်။
စစ်ကွင်းက ကရေကရာကောလေနော်။ စားချင်လာပြီ။
တစ်ချို့ က စို့ ပင်ကောက်လို့ ပြောတယ်နော်။ ၀ဲတာလားပဲ။